6 yakaderera macalorie chikafu chekudzikisa huremu | Bezzia
6 yakaderera koriori chikafu chekudzora huremu
Toñy Torres | 17/05/2021 16:00 | Chipo chekubhadhara, Nutrition
Kana iwe uchida kudzikira uremu nenzira ine hutano, pasina kudya kune njodzi uye kusingabatsiri zvine mhedzisiro inokatyamadza-refu mhedzisiro, iwe unofanirwa sanganisira yakaderera-koriori chikafu mune chako chikafu. Kudzidza kudya zvakanaka ndiko kudya kwakanyanya, nekuti chikafu chakasiyana, chakaringana uye chine hutano ndizvo izvo muviri wako unoda kuti uve noutano munguva refu. Kana ukangopinda mutsika yekudya zvakanaka, haufanire kucheka macalorie ku kuderedza uremu.
Asi kana iwe uri kutsvaga kuti uderedze huremu, uchafanirwa kubvisa izvo zvakanyanya macaloriki zvigadzirwa zvehutano. Chikafu chine mashoma macalorie aunogona kudya muhuwandu, ku dzivisa kushushikana uye mukana wekudya zvakanyanya. Iyi rondedzero yezvakaderera macalorie chikafu ichakubatsira iwe kugadzirira chikafu chako nenzira ine hutano, kuitira kuti iwe ugone kudzikira huremu usina kufa nenzara.
1 Yakaderera koriori chikafu
1.4 Chicken uye turkey
1.6 Iyo kottage chizi
Yakaderera koriori chikafu
Kiyi yekuderedza uremu kuwana simba rakaringana. Paunodya macalorie akawanda pane aunotsva, unowedzera uremu nekuti iwo macalorie anochengetwa semafuta. Naizvozvo, zvinodikanwa kuderedza koriori kudya uye kuwedzera caloric mari paunenge uchida kuonda. Nekuunza izvi zvakaderera macalorie chikafu mune chako chikafu, muviri wako unowana hushoma simba rinodiwa kuti uite zviitiko zvako zvezuva nezuva.
Nezvakanakira izvo izvo chikafu chinokubatsira iwe kudya zvakanaka, usina nzara, kana kuisa hutano hwako panjodzi. Panguva imwechete ivo vanokubatsira kurasikirwa nehuremu, zvine musoro, kubatanidza yakaderera koriori chikafu nekugara uchiita zvemuviri. Zvino hongu, ngatione zvavari izvo zvine macalorie mashoma aunofanirwa kupinza mukudya kwako kuonda.
Mune chero kudya kunovaka muviri, michero inofanirwa kunge iripo, chikafu chakaderera mumacalorie, ane mavitamini akawanda, zvicherwa uye faibha. Kunyange hazvo zviine shuga, zvine chekuita neshuga yakanatswa. Pane kupokana, ndiyo mhinduro kwayo kune avo vasingakwanise kupa chinotapira. Mukati mezvibereko, kune mamwe mashoma caloric kupfuura mamwe, semuenzaniso, manwiwa, mavise kana mahabhurosi ndiwo muchero unopa macalorie mashoma.
Miriwo kazhinji ine mashoma macalorie, ndosaka chiri chikafu chinofanirwa kudyiwa zvakanyanya mune chero chikafu, kunyanya pakurasikirwa nehuremu. Mukati meboka remiriwo, avo vane macalorie mashoma ndiwo madomasi, cucumber, zucchini, asparagus, broccoli uye celery. Idya miriwo mukudya kukuru kwezuva, zvakabikwa nemafuta mashoma uye nenzira yakasikwa kwazvo.
Kunyangwe kwemamwe makore mazai aive nechinhu chine mukurumbira wakashata, ongororo dzichangoburwa dzinoratidza kuti ndicho chikafu chakakwana chekudya chero kupi. Icho chikafu chakapfuma muvhitamini B12 uye mapuroteni, anogona kugadzirwa munzira dzakawanda dzine hutano uye akakwana pakudya kwekuseni kwakakwana.
Chicken uye turkey
Nyama dzine macalorie mashoma uye mashoma mafuta anofanirwa kukangwa kana kubikwa, aine mafuta mashoma uye kubvisa ganda. Idzi nyama dzakapfuma mumapuroteni, uye pakudya uremu, dzakakosha nekuti ndizvo chikafu chinogutsa chinodzivirira kudhakwa.
Chikafu chine mvura yakawanda chine mafuta mashoma, izvo zvinoita kuti ive mubatsiri akakwana mukudya kwekurema. Masobho akakwana mune ino kesi, sezvo akagadzirwa nezvakaderera-mafuta chikafu, ivo vari satiating, diuretic uye inogona kutorwa zvese kupisa uye kutonhora. Ehezve, ivo vanofanirwa kugara vachigadzirwa kuti vagadzirise izvo zvinosanganisa, munyu nemafuta zvemukati.
Iyo kottage chizi
MaYoguriti ane yakakwira mapuroteni zvemukati, senge kottage chizi, yogati yechiGreek kana akasarudzika ayo akatotengeswa muzvitoro zvakawanda, akakwana pakudya uremu. With mafuta mashoma kwazvo, hapana shuga yakawedzerwa uye mapuroteni mazhinjiNdicho chikafu chakakwana kutora pakati pekudya.
zvose izvi zvekudya zvinokubatsira kurasikirwa nehuremu nenzira ine hutano, Chero bedzi iwe uchivasanganisa pamwe neyakajairika chiitiko chemuviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Chipo chekubhadhara » 6 yakaderera koriori chikafu chekudzora huremu
Kufamba shangu, imwe nzira yekugadzira zvipfeko zvakanaka
Babassu mafuta anobatsira